ईमेल बनाम फेसबुक: तपाईंको मार्केटिंग डलर कहाँ लगानी गर्ने
डेरेक म्याक्लेन मा सोधे फेसबुक: यदि तपाईं एक व्यवसाय हुनुहुन्छ कि अनलाइन मार्केटिंग गर्दछ, तपाईं बरु कसैको ईमेल ठेगाना छ वा फेसबुक फ्यान उर्फ ​​व्यक्तिको जस्तै व्यक्ति छ कि तपाइँको पृष्ठ "मनपराउँछ"? तपाईंले जवाफ दिनु अघि यसको बारेमा सोच्नुहोस्।
यो ठूलो प्रश्न हो। म अनलाइन मार्केटिंगको साथ “वा” को फ्यान होइन। मलाई विश्वास छ कि बहु-च्यानल मार्केटिंग दृष्टिकोणले तपाईंको मार्केटिंगमा समग्र प्रतिक्रिया बढाउँदछ। फेसबुक एक सामाजिक मिडिया मार्केटिंग मोगल जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविकतामा फेसबुक एक विशाल ईमेल सेवा प्रदायक हो। सोच्नुहोस् कति ईमेल सन्देश तपाईं ईमेल भित्र प्राप्त गर्नुहुन्छ साथै कति सन्देशहरू तपाईं फेसबुक भित्र प्राप्त गर्नुहुन्छ। ईमेल फेसबुकको समग्र सफलताको एक विशाल च्यानल हो!
त्यो भन्यो, त्यहाँ दुई बीच एकदम ठूलो भिन्नता छ। ईमेल लुक्ने छ। यो वास्तवमै ईमेलको फाइदा हो, मार्केटरले उपभोक्तालाई अवरोध पुर्‍याउँछ। यो पनि जोखिमपूर्ण छ ... ईमेल ग्राहक र ग्राहक बीचको लाईफलाइन हो तर यदि यो दुरुपयोग गरिएको छ भने, तपाईं एक सदस्यता रद्दबाट एक क्लिक गर्नुहुन्छ - वा नराम्रो - रद्दी फिल्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। मार्केटर्सले ईमेलको उपयोगको साथ सावधानी अपनाउनु पर्छ, यद्यपि सुस्वाइकरहरू अझ संवेदनशील भइरहेका छन्।
एक ईमेल ठेगाना एक उपभोक्तासँगको हुनु उत्तम, उच्च मूल्यको सम्बन्ध हो किनभने जब तपाईले ठेगाना उठाउन सक्नुहुन्छ तपाईं माग चाहिन्छ।
फेसबुक अलि कम घुसपैठो छ (अहिलेको लागि)। समयसँगै, अधिक र अधिक व्यवसायहरूले मार्केटिंगका लागि फेसबुकको उपयोग गर्न थाल्दा उपभोक्ताको संवेदनशीलता बढ्न थाल्छ। जहाँसम्म, फेसबुक अझै पनि पर्याप्त गैर घुसपैठ छ। दिनमा एक वा दुई पटक मेरो पर्खालमा अपडेट पोष्ट गर्नको लागि कम्पनीमा अवरोध धेरै छैन। यो झलक गर्न सजिलो छ र धेरै धक्का बिना उपभोग।
एक फेसबुक अनुयायी उपभोक्ता संग हुन एक शानदार, दीर्घकालीन सम्बन्ध हो किनभने तिनीहरूले निष्क्रिय तपाईको ब्रान्डको अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईको कम्पनीको बारे स्पष्ट रूपमा हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ।
त्यसो भए - मेरो उत्तर "यो निर्भर छ" र "दुबै" हो। अनलाइन मार्केटिंग टेक्नोलोजी भरिका प्रत्येक च्यानलसँग यसको व्यवहार आबद्ध हुन्छ। यहाँसम्म कि सोशल मिडिया अन्तरिक्ष भित्र प्रत्येक च्यानल प्रयोगकर्ताहरुबाट फरक अपेक्षा राख्छ। प्रत्येक बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्नुहोस्, प्रयोगकर्ताहरूको व्यवहार अवलोकन गर्नुहोस् जब तपाईं उनीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुहुन्छ।
टैग: गुगल प्लेItunesवैध समाचार भेलाबिक्री सफ्टवेयरटोली भवनप्रयोगकर्ता इन्टरफेस डिजाइनux
RIP: तपाईंको सबै डाटाबेस मैटको हो
जुन 16, 2010 मा 2: 14 PM
ईमेल सूची अझै पनी मूल्य छ, यदि तपाईले ठेगानाहरू स्वामित्व पाउनुभयो भने।
फेसबुक पनि राम्रो छ, तर यसले भोलि बन्द हुन सक्छ वा यसको लोकप्रियता गुमाउन सक्छ। त्यसो भए, तपाईसँग केहि छैन यदि यो एक मात्र रणनीति थियो।
जुन 18, 2010 मा 2: 59 PM
म दुबैलाई रुचाउँछु, किनकि खोज ईन्जिन अनुकूलनमा उनीहरूको आफ्नै प्रभाव छ। ईमेल जोखिमपूर्ण हुन सक्छ किनकि यसले प्राप्तकर्ताहरू स्प्याम सन्देश फोल्डरमा जान सक्दछ, र म जस्तो व्यक्तिले स्प्याम फोल्डर खाली गर्दछ, यसमा हेराई नगरी। जबकि फेसबुक यस तरीकाले धेरै सुरक्षित छ।
जुन 19, 2010 मा 6: 55 PM
धेरै चाखलाग्दो लिनुहोस्। ईमेल आधारित मार्केटिंग बनाम ईमेल आधारित सामाजिक मार्केटिंग नेटवर्कको सम्बन्धमा मैले हस्तक्षेपको बारेमा कहिल्यै सोचेको छैन। मलाई लाग्छ हामी फेसबुक फेसबुक सोशल नेटवर्कि postको लागि राम्रो तयारी गर्छौं। म ओवरटाइमसँग सहमत छु, फेसबुक "notif" ईमेल श्राप जस्तो स्प्याम हुन सक्छ यदि ईमेल मार्केटर्सको एक ठूलो हिस्सा फेसबुक र सोशल नेटवर्कि toमा पूरै पार गर्दछ भने।
जुलाई,, २०१ at 28::2010। बिहान
म फेसबुक मार्केटि more अधिक अगाडि बढाउँछु, किनकि यसले तपाईंको उत्पादन / सेवालाई अधिकतम एक्सपोजर दिन्छ, ईमेल मार्केटिंगमा पनि, तपाईंलाई अधिक सावधान हुनु आवश्यक छ, किनभने धेरै जसो मार्केटिंग मेलहरू स्पाम फोल्डरमा जान्छन्, र म जस्ता व्यक्तिहरूले स्प्याम फोल्डर खाली गर्दछन्। एकल हेराई बिना नै, त्यसैले यसको मेरो विचारमा कुनै प्रयोगको छैन।
अगस्ट,, २०१72011:२१ अपराह्न
अधिक सहमत हुन सकेन, जब मार्केटर्सले फेसबुकलाई अर्को ईमेल मार्केटिंग प्लेटफर्मको रूपमा लिन्छन् म म अन्योलमा छु - यो केवल यसको उद्देश्य वा परिणामस्वरूप प्रयोगको मात्र होइन!
म फेसबुक अधिक मार्केटर्सलाई उनीहरूको ईमेल मार्केटिंगको साथ मद्दतको लागि एक अतिरिक्त उपकरणको रूपमा देख्छु। म प्रयोग गर्छु http://www.fb2icontact.com प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको ईमेल ठेगानाहरू मेरो आईकन्ट्याक्ट सब्स्क्राइबर सूचिहरूमा सबमिट गर्नका लागि, जुन आगन्तुकलाई १-क्लिकको साथ सदस्यता लिन सजिलो बनाउँदछ, र मलाई मार्केटरले सुनिश्चित गर्दछ कि मैले सहि र पूर्व-प्रमाणित ईमेल ठेगाना पाएँ।
ईमेल उपकरणको भविष्यको लागि योगदान पुर्‍याउन मा फेसबुकको स्थानको रूपमा म त्यस्तो उपकरणहरू देख्छु, तर कुनै पनि प्रतिस्पर्धा वा प्रतिस्थापन द्वारा।